Gbasara anyị - Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd.
Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd. e hiwere na August 2014 na a aha isi obodo nke 25 nde yuan. Site na isi ụlọ ọrụ dị na Cheng 'County, ógbè Hebei, nke a maara dị ka "North China Carbon Base", O nwere ndị enyemaka abụọ: Hebei Rubang Carbon Products Co., Ltd Panzhihua Branch office and Handan Damai Carbon Co., Ltd.
Ugbu a isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ bụ ike graphite electrode (75mm-1200mm), ike gradite gradite (200mm-700mm), nnukwu ike gradite (300mm-700mm), mpịakọta electrode maka isi ọkụ, mmanụ ala coke, carbonizing gị n'ụlọnga, pụrụ iche graphite ngwaahịa na ọhụrụ carbon ihe, wdg
Site na ikike imepụta kwa afọ nke tọn 30,000, a na-ere ngwaahịa ndị a nke ọma karịa mpaghara 20 n'ụlọ ma na-ebupụ ya n'ọtụtụ mba na mpaghara dịka United States na Japan, wdg.
A na-arụpụta ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ obodo iji zute ọnụọgụ ngwaahịa tozuru oke ruo 99.2%. The graphite electrode na-ere dị ka isi ngwaahịa na-ewere ọnọdụ nke mbụ nke ngwaahịa niile.
Anyị ụlọ ọrụ dum àgwà management e ọzọ tozuru etozu, humanized na modernized ebe ọ nwetara ISO àgwà na gburugburu ebe obibi management usoro asambodo.
Nkà na ụzụ R & D.
1. Nkà na ụzụ
Na-aga n'ihu ọganihu nke sayensị na nkà na ụzụ, anyị ụlọ ọrụ accelerates nkà na ụzụ ọhụrụ na-ewusi sayensị management na-achụso echiche nke "ahịa mbụ, aha mbụ" na mgbe niile ịgbasa ahịa òkè.
Kemgbe ọtụtụ afọ ụlọ ọrụ mgbe niile rube isi na "dabere na ogo na teknụzụ iji mepụta ngwaahịa na ọrụ kachasị mma na Ogo nke mbụ na-esite n'ịchụso ịdị mma ma na-eduzi mgbanwe ndị ahụ iji ghọta ịdị na-ebi ndụ na mmeri" azụmahịa.
Ilebara ndị ahịa anya ma na-aga n'ihu mgbe niile n'ịchụso ịdị mma, Rubang Carbon ejirila nwayọọ nwayọọ na-eme ka mmekọrịta akụ na ụba na teknụzụ na mmekọrịta mmekọrịta na ndị enyi yana ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi n'ụlọ na mba ọzọ.
Na-elekwasị anya na mmepe nke ngwaahịa dị iche iche site na nyocha nke ndị ahịa na-eduzi yana mmepe na mmepe na-aga n'ihu na-akwado mmesi obi ike kemgbe mmalite nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ mepụtala ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ carbon dị ọkara iji nye ihe carbon na ngwaahịa dị mkpa n'ọtụtụ ubi.